भारत–चीन सीमा विवाद : शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेमा नेपालको विश्वास : RajdhaniDaily.com
Home Breaking News भारत–चीन सीमा विवाद : शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेमा नेपालको विश्वास
काठमाडौं । भारत र चीनबीचको सीमा विवादलाई नेपालले शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न दुवै देशलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल सधैं क्षेत्रीय र विश्वशान्तिको पक्षमा रहेको भन्दै गलवान उपत्यकामा देखिएको विवाद दुवै देशले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गर्ने विश्वास नेपालले व्यक्त गरेको छ ।
लद्दाखको गलवान घाटीमा भएको भारतीय—चिनियाँ सुरक्षाकर्मीबीचको झडपका क्रममा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । सो घटनाको भारत र चीनले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाइरहेका बेला नेपालले भने शान्तिपूर्ण तवरमा समस्या हल गर्न भनेको छ ।
सात देशसँग भारतको सीमा जोडिएको छ । भारतको भूमि सीमाको कुल लम्बाइ १५ हजार १ सय ६ दशमलव ७ किलोमिटर रहेको छ । त्यसबाहेक ७ हजार ५ सय ६ दशमलव ६ किलोमिटर लामो समुद्री सीमा छ । चीनसँग भारतको ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ । यो सीमा जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा रहेको छ ।
भारत र चीन सीमामा ४५ वर्षपछि पहिलोपटक दुई देशका सैनिकबीच दोहोरो भिडन्त हुँदा मानवीय क्षति भएको थियो । सन् १९६६ मा दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा भएको सम्झौताको ६ नम्बर बुदाँले हिंसालाई प्रश्रय दिएका कारण सो घटना हुन पुगेको भारतमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
सन् १९६६ मा तत्कालीन चीनका राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री एचडी देवगौडासँग ‘एलएसीमा सैन्य क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्ने’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रको पोस्टमा कुनै खतरा हुन्छ भने सबैखाले हतियार चलाउन पाइने ६ नम्बर बुदाँमा राखिएको छ । चीनले सोही बुँदामा भएबमोजिम भारतीय सेना आफ्नो क्षेत्रमा आएपछि आपूmहरूले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । तर, भारतीय सैनिकले भने चिनियाँ सेनाले सीमा क्षेत्र नाघेपछि झडप भएको जनाएको छ ।
भारत र चीनबीच ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये अरुणाञ्चलदेखि लद्दाखसम्मका धेरै ठाउँमा लाइन अफ एक्चुयल कन्ट्रोल कुन हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । लामो समयदेखि सो सीमा क्षेत्रको विषयलाई लिएर चीन र भारतका सैनिकबीच धकेलाधेकलसम्मको अवस्था थियो । तर, गत सोमबार एक्कासि चीन र भारतका सेनाबीच दोहोरो भिडन्त हुँदा २० भारतीय सेना मारिए । भारतीय सेना मारिएपछि अहिले दुई देशको तनाव अझै मत्थर भइसकेको छैन ।
सीमाको विवादमा भएको झडपमा भारतलाई क्षति भएपछि चीनविरोधी भावना बढेको छ । भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्ने हो भने अब भारत पूरै चीनविरोधी भएर जान्छ भन्नेमा केन्द्ति छ । उसका उत्पादन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने समाचारलाई बढावा दिइएको छ । तर, अहिले नै भारतले चिनियाँ सामग्री आयात बन्द गर्ने अवस्था भने छैन ।
२६०७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३९ जनाकाे मृत्यु
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा २६०७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७७११ जनामा भएको पीसीआर परीक्षणमा १७६८...
काठमाडौं ।सरकारले सम्झौता गरेर पनि भारतबाट खोप नआएपछि अब उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट खोप खरिद गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । सरकारले निटक भविष्यमा...
‘प्रतिनिधिसभा विघटन चित्तबुझ्दो छैन’
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन जनमतको कदर नभएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद उदया शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटन चित्तबुझ्दो नभएको...
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - May 10, 2020 0
भक्तपुर । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरामा एक पक्षीय रुपमा बाटो बनाई मानसरोबर मार्ग खोलेको खोलेको विरुद्ध नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी...
नेपालमा बढ्न सक्ने शरणार्थी समस्या
प्रमुख Kumar Raut - March 7, 2020 0
काठमाडौं । भुटानी र तिब्बतीयन शरणर्थीको समस्या खेपेको नेपालले पुनः रोहिंग्या मुस्लिमहरूको समस्या खेप्ने देखिएको छ । अहिले सात वर्षयता म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै...
Exclusive Kumar Raut - August 13, 2020 0
आईपीएल खेलाउन श्रीलंका इच्छुक
खेल Kumar Raut - April 18, 2020 0
कोलम्बो । कोरोना भाइरसको महामरीबीच श्रीलंकाले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १३औं संक्रमण्मा आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)ले कोरोनाका कारण...
भर्खरै Kumar Raut - June 24, 2020 0
काठमाडौं । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न । म देश र...
कोरोनाबाट बाराको जीतपुरसिमरामा एक जनाको मृत्यु
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - August 13, 2020 0
सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकामा कोरोनाका कारण एक जनाको ज्यान गएको छ । नगरको वडा नम्बर ४ स्थाई घर भएका ५५ बर्षीय शेख समी...
Breaking News Roshan Shrestha - June 15, 2020 0
काठमाडौं । पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले घटनामा निधन भएकाहरूको हत्या नै...
नेकपा विवादः शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी बैठक अन्योलमा
Editor-Picks Dhruba Lamsal - November 4, 2020 0
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी बैठक एवं छलफल अन्योलमा परेको छ । पार्टी भित्रको किचलोले पार्टी...
न्युकासल युनाइटेडमा साउदी अरबको लगानी
खेल Kumar Raut - April 21, 2020 0
लन्डन । इंग्लिस प्रिमियर लिगको न्युकासल युनाइटेडलाई साउदी अरेबियाको सार्वभौम धन कोषले खरिद गर्ने भएको छ । साउदीको कोषले ३ सय मिलियन पाउन्डमा न्युकसलको...
विवेक विवश रेग्मी - June 18, 2021